Ungarhoxa simahla ngaphambi kwe-16 Dis.
Indlu yeeNdwendwe eLesnoy ibekwe eLeski. Ibonisa indawo yokutyela, indawo yaselwandle yabucala kunye nezibonelelo zebarbecue. I-chalet ikwi-9 km ukusuka kwidolophu yaseSulina. Ibonelela nge-air conditioning, i-Wi-Fi yasimahla kunye neendawo zokupaka zabucala kwisiza.
I-chalet inomdlali we-Blu-ray, ikhitshi ene-microwave, ifriji kunye ne-oven, igumbi lokuhlala elinendawo yokuhlala kunye nendawo yokutyela, amagumbi okulala ama-3, kunye namagumbi okuhlambela ayi-3 kunye nebhafu ye-spa kunye ne-bidet. Ibandakanya iTV yesathelayithi
Ukuloba kunye nokuzingela kwiGostiny Dvor "Danube" Vilkovo
UGostiny Dvor "uDanube" umema wonke umntu ukuba ajike umbhiyozo woNyaka oMtsha, itheko lenkampani, umtshato okanye usuku lokuzalwa eVilkovo ube sisiganeko esingalibalekiyo kwiiholo zezindlu zethu ezipholileyo nezitofotofo! Apha unokuba nexesha elimnandi, uhlambe umphunga ngo-Eva woNyaka omtsha, ukufudumala kwindawo yomlilo - ngokubanzi, uchithe ubusuku obumnandi obujikelezwe yintsapho, abahlobo kunye noogxa basemsebenzini.
I-Chalet yomgangatho waseYurophu. Amagumbi okulala ama-3, isitudiyo segumbi lokuhlala, igumbi leziko, amagumbi okuhlambela ayi-3, ubunewunewu obungaphakathi bokwenyani, ifenitshala ebiza kakhulu kunye nezixhobo-sauna. Imfashini kakhulu kwaye i-atmospheric. Umbono othe ngqo weYurophu. Ichibi lakho elisentendelezweni kunye ne-beach-pier yalo elunxwemeni lweDanube. Ukuloba, ukuloba kunye nelayisensi yokuzingela. Uhambo oluya kwiDanube Biosphere Reserve ngalo naluphi na uhlobo lwezothutho (ngamanzi, ngomhlaba, ngomoya). Indawo egadiweyo, indawo yokupaka iindwendwe, abamelwane abafanelekileyo, inkampani emnandi ngeeholide zikaMeyi. Ngokuqinisekileyo yonke into yokuhlala ungalibaleki! Abapheki bethu baya kukumangalisa ngokutya kwasekhaya! Sikulindile! Siza kuququzelela ixesha lakho lokuphumla! Ikhowudi yesinxibo enemixholo yamkelekile! Uxolo-Uxolo!
Indalo kule ndawo ibetha ngobuntombi bayo kunye nombala! Ungaphoswa lithuba lokubona into entsha nemangalisayo ebomini bakho.
Ukubhiyozela uNyaka oMtsha eGostiny Dvor Danube, ekwi-Delta yaseDanube, kuya kukhunjulwa iminyaka emininzi!
200 $ usuku -10 abantu
Danube River 0.10 km
Ulwandle Olumnyama 8 km
Рыбалка охота .Монако. Кухня французская.